Amafayela e-DMG, avulwa kanjani? Bayini? | Ngivela kwa-mac
U-Ignacio Sala | | Izinhlelo ze-Mac, Izifundiswa
Uma ekugcineni sithathe isinqumo sokushintsha sisuke ku-Windows siye ku-Mac, kungenzeka ukuthi phakathi namasonto okuqala, uzolahleka kancane, hhayi kuphela ngenxa yokushintsha kwesixhumi esibonakalayo, kodwa futhi nangenxa yendlela esingaxhumana ngayo nayo. Uhlelo lokusebenza lwe-Apple lwamakhompyutha nama-laptops. Olunye lwezinguquko ezinkulu olungeke luhehe ukunakwa kakhulu yi akukho ukutholakala kwamafayela asebenzayo, amafayela ajwayelekile we-.exe.
Ku-Mac kusetshenziswa ifomethi ye-DMG. Amafayela akule fomethi yi amafolda esitsha lapho uzothola khona izinhlelo esifuna ukuzifaka kukhompyutha yethu, ngokushesha futhi kalula. Ngaphandle kokuthi ufuna izinhlelo ezithile ezingatholakali ku-Mac App Store, akunakwenzeka ukuthi uzogcina ngefayela lolu hlobo.
1 Iyini ifayela le-DMG futhi yenzelwe ini?
2 Uwavula kanjani amafayela we-DMG
2.1 Ukufaka okuqukethwe okungaphakathi
2.2 Buyisela okuqukethwe kudrayivu
3 Yiluphi uhlelo engiludingayo ukuvula ifayela ngefomethi ye-DMG
4 Okufanele ukwenze uma ifayela le-DMG lingavuleki
5 Ungaliguqula kanjani ifayela le-DMG libe yi-EXE
6 Uwafunda kanjani amafayela we-DMG ku-Windows
6.2 Isikhiphi se-DMG
7 Uwafunda kanjani amafayela we-DMG ku-Linux
Iyini ifayela le-DMG futhi yenzelwe ini?
Amafayela e-DMG ayalingana namafayela ngefomethi ye-ISO ku-Windows, ngoba lapho evulwa, kuyakhiwa iyunithi entsha, iyunithi okufanele sikwazi ukuyifinyelela ukuze sifake ifayela elihambisanayo kukhompyutha yethu noma simane siyise kufolda yezinhlelo zokusebenza. . Lolu hlobo lwefayela luvame ukuqukethe, ngaphezu kwefayela elisivumela ukuthi sijabulele uhlelo, idokhumenti yombhalo enencazelo emfushane noma imiyalo ngokusebenza kwayo noma ukuhambisana kwayo.
Uwavula kanjani amafayela we-DMG
Amafayela we-DMG alingana nama-ISOs ku-Windows. Amafayela ngefomethi ye-ISO, awagcini nje ngokusivumela ukuthi singene ngaphakathi kwawo futhi siwakopishele kwi-CD noma i-DVD njengoba injalo, kepha futhi sivumele ukufaka noma ukukopisha okuqukethwe kwabo. Amakota amathathu afanayo kwenzeka ngamafomethi ngefomethi ye-DMG, ngoba ifayela ngokwalo lingaba isifaki esilivulayo, isikhathi, noma kungaba isithombe sediski esiqukethe amafayela ahlukile okufanele akopishwe nakwelinye ifayela noma kudrayivu yangaphandle.
Ukufaka okuqukethwe okungaphakathi
Yize ekuqaleni kungabonakala ngathi sizodinga ukwenza inqubo eyinkimbinkimbi ukuze sikwazi ukuvula ifayela ngefomethi ye-DMG, akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni, ngoba kufanele sichofoze kabili kulo ukudala iyunithi entsha lapho sizothola konke okuqukethwe okungaphakathi. Ngemuva kwalokho kuphela okumele sikwenze finyelela idrayivu okukhulunywa ngayo bese usebenzisa ifayela ukufaka noma ukusebenzisa.
Kumele sicabangele uhlobo lwefayela oluyilo, ngoba kwezinye izikhathi, ukufakwa kukodwa akwenziwa kwi-Mac yethu, kepha uhlelo lokusebenza lisebenza kuphela, ngakho-ke uma kamuva silisusa ifayela le-.DMG sizolahlekelwa ukufinyelela kuhlelo lokusebenza. Kulezi zimo, uma kunguhlelo olusebenzayo, kufanele sihudulele ifayela kuzinhlelo zokusebenza.
Buyisela okuqukethwe kudrayivu
Ngakolunye uhlangothi, kungumfanekiso oqukethe ikhophi yeyunithi, ngeke kusisize ngalutho ukufinyelela ingaphakathi lefayela ukulihlola uma singeke sikwazi ukufinyelela kudatha noma ukwenza ukusetshenziswa kwesicelo. Kulezi zimo, kufanele sisebenzise iDiski Utility, esingakwazi ngayo khetha zombili ifayela ngefomethi ye-DMG esifuna ukuyibuyisa neyunithi lapho sifuna ukukwenza ngokushesha futhi kalula.
Yiluphi uhlelo engiludingayo ukuvula ifayela ngefomethi ye-DMG
NjengakwiWindows awudingi noma yiluphi uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu ukusebenza namafomethi ngefomethi ye-ISO, kwi-Mac awudingi noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukusebenza namafayela ngefomethi ye-DMB, yize kwi-Intanethi singathola izinhlelo ezahlukahlukene esivumela ukuthi sizenze akudingeki ngempela, ngaphandle kokuthi siphoqelekile ukuvula lolu hlobo lwefayela kwamanye amapulatifomu njenge-Windows noma i-Linux, lapho uhlelo lokusebenza lwe-PeaZip lungenye yezinconywa kakhulu, uhlelo lokusebenza lwamahhala ngokuphelele.
Okufanele ukwenze uma ifayela le-DMG lingavuleki
Kusukela kwethulwa i-MacOS Sierra, i-Apple isuse ngokwendabuko amandla okufaka izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ezingadalwanga ngonjiniyela ababekhonjwe ngaphambili yi-Apple. Uma ifayili le-DMG eliqukethe uhlelo lokusebenza esifuna ukulifaka lisikhombisa umlayezo wephutha, othi lelo fayela kungenzeka lonakele, kufanele sisebenzise amandla wokusebenzisa izinhlelo zenkampani yangaphandle ngokufaka umugqa olandelayo ku-Terminal.
iso! phambi kwenkosi kukhona odwi ababili (- -) Okulandelayo kufanele siqale kabusha iSitholi ngomyalo olandelayo: Isitholi seKillall
Lapho sesiwufakile lowo myalo, sibuyela esigabeni Sezokuphepha nobumfihlo esisezintandokazi zohlelo nakuVumela izinhlelo zokusebenza ezilandwe kusuka ku: khetha Noma kuphi.
Ungaliguqula kanjani ifayela le-DMG libe yi-EXE
Ifayela le-DMG, njengoba ngishilo ngenhla, yifolda equkethe izinhlelo zokusebenza eziningi, ezakha iyunithi lapho sizivula, ngakho-ke akulona ifayela elisebenzisekayo ku-Mac, ngakho-ke, asikwazi ukuguqula ifayela le-DMG libe yi-EXE. Ukuzama ukuguqula ifayela le-DMG libe yifayela elisebenzisekayo kufana nokuguqula ifolda enezithombe (ngokwesibonelo) zibe yifayela elisebenzisekayo.
Uwafunda kanjani amafayela we-DMG ku-Windows
Uma sifuna ukufinyelela okuqukethwe okugcinwe kufayela le-DMG kwi-PC, ku-Windows esinakho izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezisivumela ukuthi sivule iziphu kufayela lokuqukethwe. Enye inkinga ukuthi kukhona esingakwenza ngokuqukethwe kukho. Izicelo ezinhle kakhulu esingazithola manje emakethe ngalo msebenzi yiPeaZip, 7-Zip ne-DMG Extractor.
Elinye lamathuluzi amahle kakhulu wokusebenza namafayela acindezelwe yiPeaZip, ithuluzi elihambisana nawo wonke amafomethi asetshenziswa kakhulu emakethe, ngaphezu kwe-DMG, ISO, TAR, ARC, LHA, UDF ... I-interface yomsebenzisi inembile kakhulu futhi ngeke sibe nankinga yokubamba ngokushesha lolu hlelo lokusebenza ukuvula unzip noma yiliphi ifayela le-DMG kwiWindows PC yethu.
I-DMG Extractor, njengoba igama layo liphakamisa, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokukwazi khipha okuqukethwe kumafayela ngefomethi ye-DMG ngokushesha futhi kalula. Leli thuluzi alikho mahhala kepha ngezikhathi ezithile, singalanda inguqulo yesilingo ngokusebenzisa isixhumanisi esilandelayo, inguqulo esivumela ukuthi sinciphise amafayela ngefomethi ye-DMG osayizi wayo ongadluli ku-4 GB
I-7-Zip iyithuluzi elihle kakhulu lokucindezela nokudicilela phansi noma yiluphi uhlobo lwefayela ku-Windows PC yethu, ithuluzi futhi kumahhala ngokuphelele futhi kuyahambisana namafayela we-MacOS DMG. Lapho sesilufakile uhlelo lokusebenza, kufanele nje sizibeke ngaphezulu kwefayela, chofoza kwesokudla bese ukhetha okuvulekile nge-7-zip ukuze okuqukethwe kuqale ukukhishwa.
Uwafunda kanjani amafayela we-DMG ku-Linux
Kepha uma sifuna ukuvula amafayela ngefomethi ye-DMG ku-Linux, singasebenzisa iPeaZip futhi, uhlelo olufanayo esingalusebenzisa ukucindezela lolu hlobo lwamafayela ku-Windows, uhlelo lokusebenza iyahambisana namafomethi angaphezu kwe-180 Futhi kukhululekile ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Amafayela e-Dmg
santiago estrada kusho
Lapho uchofoza kabili ifayili elingavuleki, kuhlala sengathi alifakanga ifayili
Phendula ku-santiago Estrada
Imfundo, ama-Mac nama-idevices. Ukuhamba ngamasu
ULisa, indodakazi kaSteve Jobs ubhala incwadi ngobudlelwano bakhe noyise